“မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်တွင် ထောင်ဝင်စာပို့သည့် ကြက်သွန်နီများကို မသင်္ကာလို့ စစ်ကြည့်လိုက်ရာ” – Real Posts News
“မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်တွင် ထောင်ဝင်စာပို့သည့် ကြက်သွန်နီများကို မသင်္ကာလို့ စစ်ကြည့်လိုက်ရာ”
မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်(၂၄)နှစ်ကျခံနေသူအား ထောင်ဝင်လာတွေ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကထောင်ဝင်စာပို့သည့်ပစ္စည်းထဲသို့ မူးယစ်ဆေးများထည့်သွင်းပို့ဆောင်သည်ကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းမြမြို့. အကျဉ်းထောင်တွင် ၁၁.၆.၂၀၁၉.ညနေ.၅.နာရီခန့်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်(၂၄)နှစ်ကျခံနေသော.မြတ်လင်းစံအား .ထောင်ဝင်စာတွေ့ရန်လာရောက်သည့်. မညွန့်ညွန့်စန်း(ခ)မသဇင်ယူဆောင်လာသော ထောင်ဝင်စာပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရေးတာဝန်ကျ. လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး.၁. ညီညီထက်နှင့် အဖွဲ့မှ ရှာဖွေစစ်ဆေးစဉ် .ကြက်သွန်နီဥများအားမသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိကြောင်း အကြောင်းကြားသဖြင့်. မြောင်းမြရဲစခန်းမှနယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် .ဒုရဲအုပ်တင်ကိုကိုလင်းနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ.၊
အမှတ်.၄.ရပ်ကွက်အုပ်မှူး.၊ ဦးသန်းဆွေဦးအမှတ်. ၂.ရပ်ကွက်ရာအိမ်မှူးဦးနိုင်ဝင်းတို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ သက်သေများရှေ့တွင်မညွန့်ညွန့်စန်းယူဆောင်လာသည့် .မြတ်လင်းစံ(ဘ)ဦးလှဝင်းအမည်ပါသည့် အဖြူရောင်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွင်းမှ ကြက်သွန်နီဥခွံ(၂၄)လုံးအတွင်းပလပ်စတစ်.၁.ထပ် ၊ခဲရောင်စက္ကူ.၁.ထပ်တို့ဖြင့်လုံး၍ထုပ်ထားသော.
WY.စာတမ်းပါစိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား.ပန်းရောင်(၁၄၀၀)ပြားအလေးချိန်(၁၄၀)ဂရမ်.အစိမ်းရောင် (၁၀)ပြားအလေးချိန်. ၁.ဂရမ်.စုစုပေါင်း(၁၄၁၀)ပြားတန်ဘိုးငွေ.(၄၂၃၀၀၀၀)နှင့်ICE. ဟုယူဆရသော.အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲ. အလေးချိန်(၂၄)ဂရမ်. တန်ဖိုးငွေ(၁၂၀၀၀၀၀)တို့အားတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမညွန့်ညွန့်စန်းထံမှ ဘေးလွယ်အိတ်တစ်လုံး .လက်ကိုင်ဖုန်း.၂.လုံး.မှတ်ပုံတင်နှင့်အိမ်ထောင်စုစာရင်း.ငွေစက္ကူရောရာ.၁၅၈၀၅၀ိ/ကျပ်တို့အား ရှာဖွေပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး. စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားနှင့် ICE.ဟုယူဆရသောအဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲတို့အား
တရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိ သယ်ဆောင်သူ .မညွန့်ညွန့်စန်း(ခ)မသဇင်(၃၃)နှစ်(ဘ)ဦးခင်ညွန့်.အမှတ်.၃၈၁.ယမုံနာ.၂.ရပ်ကွက်.ဒေါပုံမြို့နေသူနှင့် .အကျဉ်းကျနေသူ.မြတ်လင်းစံ(ခ)မြတ်စံ(ခ) လင်းလင်း(၃၇)နှစ်(ဘ)ဦးလှဝင်း.တိုက်.၅.အခန်း(၂၀၈)အေဘလောက်.၈၄. ရပ်ကွက်.ယုဇနဥယာဉ်မြို့တော်. ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြိုနယ်.ရန်ကုန်တို့အားမြောင်းမြမြို့မရဲစခန်းမှ(ပ)၇/၂၀၁၉ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောပုဒ်မ.၁၉(က)/၂၀(က)/၂၁.အရအရေးယူဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်…‌
ပြည်လမ်းမ၌ Hijet နှင့် YBS မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှု အမျိုးသားနှစ်ဦးသေဆုံး
တညင်းကုန်းဈေးဟောင်းရှိ လက်ကျန် ဈေးသည်များကိုပြောင်းရွှေ့ပြီး ဈေးပိတ်သိမ်းမည်
“တရုတ်မှာ ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့် လူခြောက်ဦးထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ၇၅ ဦး ဒဏ်ရာရ”
Previous Article “လိုင်စင်အသိမ်းခံရလို့ Sexy မဝတ်ပဲတော့ မနေပါဘူးဆိုတဲ့ နန်းမွေစံ”
Next Article ခင်လှိုင်ကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ခွင့်ရလာတယ်ဆိုတဲ့ ညီနန္ဒ
သူ့ဓာတ်​ပုံကို ခက်​ရင်း(ဇွန်း) နဲ့​ခေါက်​ပြီး … ​ဒေါသသံ အမိန့်​သံ နဲ့ ​ခေါ်လိုက်​ပါ … ပြန်​​ရောက်​လာလိမ့်​မယ်​ … “
#ဓမ္မာစရိယတန်းမှာလည်း ဒီကိုရင်​က “ဟတ်​ထရစ်” ပဲ
ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထားမရှိတာကြောင့် ဘောလိဝုဒ်မင်းသားကြီး Nana Patekar အပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု စွဲချက်ကို ပယ်ဖျက်